Maxaa Ka Run Ah In Henrikh Mkhitaryan Uu Isaga Tegi Doonaa Kooxda Roma. - Wararka Maanta
Henrikh Mkhitaryan ayaa laga yaabaa inuu ka tago Roma dhamaadka xilli ciyaareedka, sida laga soo xigtay Calciomercato Armenian-ka ayaa leh qodobka qandaraaskiisa kaasoo dhaliyay in la kordhiyo ka dib 25 kulan oo uu saftay – waana tiro uu horay u gaaray xilli ciyaareedkan.
Laakiin iyada oo kooxda Roma ay jahwareer ku jirto, Mkhitaryan iyo wakiilkiisa Mino Raiola ayaan wali aqbalin kordhinta qandaraas cusub waxayna raadin karaan meel kale ay la heshiiyaan hadii aysan miiska wadahalka lagu heshiinin.
Xidigii hore ee arsenal iyo manchester united Mkhitaryan ayaa isaga huleeli doona Kooxda caasimada ka dhisan waxaana uu u weecan karaa horyaalada waa weyn ee qaarada yurub waxaa sidoo kale macquul ah inuu kusii nagaado talyaaniga uuna qeyb ka noqto kooxaha ka dhisan.
Waxaa la ciyaaray Kulamo ka tirsan Koobka Euro 2020 Guruubka B iyadoo Xulalka Belgium-ka iyo Finland ay gaareen guulo Muhiim ah.
Xulka Finland ayaa guul ciriiri ah ka gaaray Denmark oo marti loo ahaa waxana goolka kaliya ee ku badisay kulankan u saxiixay xidiga Joel Pohjanpalo.
Labada Qaran ee Finland iyo Denmark ayaa qeybta hore ku kala nastay goolal la’an iyadoo ay xusid mudantahay in Xidiga Christian Eriksen uu garoonka ku dhacay qeybta hore taasi oo keentay in Ciyaarta la hakiyo daqiiqado badan.
Daqiiqadii 60 ee qeybta Danbe ayay Finland u suura gashay helitaanka Goolka guusha ee Kulankan waxana u dhaliyay Joel Pohjanpalo kaasi oo madaxa la helay kubad dhinac laga soo qaaday.
Denmark ayaa ku dhawaatay in ay bar bareeso Goolka kulankan Daqiiqadii 74aad markaasi oo loo dhigay Rigoore xidiga Pierre-Emile Hoejbjerg kaasi oo ka qasaariyay Xulkiisa guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-1.
Dhanka kale waxaa la ciyaaray kulan kale oo isla Guruubka B Xulka Belgium ayaana guul daro 3-0 dhabarka u saariyay Ruushka oo marti ahaa waxana Belgiumka goolasha ka caawiyay Romelu Lukaku iyo Thomas Meunier.
Wararka Maanta : Chelsea oo ku aaday Manchester City: isku Aadka Koobka FA Cup-ka oo la...
Xidigaha Belgium ayaana Hogaanka kulankan qabtay ciyaarta oo Socota 10 Daqiiqo Markii Lukaku oo dhameestiray kubad ku dhacday Mid kamid ciyaartoyda Ruushka.
Laacibkan ayaa dabbaal-deggii waxa uu hor-tegay kamaradda isagoo ku qaylinaya ‘Chris, waan ku jecelahay’, taas oo uu ula jeediyey Christian Eriksen oo uu goolkaasna u hibeeyey.
Thomas Meunier ayaa ku daray goolka labaad daqiiqaddii 34aad, isagoo ciyaartana ka dhigay 2-0.
Ruushka ayaa isku dayay inay helaan fursado, waxaanay xerada ganaaxa ee Belgium geeyeen kubbado badan, balse dhibaatadooda ayaa ahayd khadka dambe ee difaaca oo xammili kari waayey culayska uu ku hayey Romelu Lukaku.
Daqiiqaddii 88aad ee dhamaadka ciyaarta ayuu mar kale Lukaku shabaqa ku hubsaday goolka saddexaad ee ciyaarta, waxaana kubbad uu ka helay Meunier uu ciyaarta kaga dhigay 3-0
Wararka Maanta : Roma Oo Wadahadal Kula Jirta Saxiixa Xiddiga Arsenal Granit Xhaka.
Wararka Maanta : Wararkii ugu Danbeeyey Maxaa Laga Filankaraa Dagaalka Cusub ee...
Wararka Maanta : Maxaa Kadhalan Kara Guusha Doorashada Farmaajo & Abiy Ahmed | Maxaa Xiiso Leh